बीई चौथो वर्षको परीक्षा चलिरहँदा ८० विद्यार्थीमा संक्रमण देखिएपछि पोखराको पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पठनपाठन अनिश्चितकालीन अवरुद्ध भयो । शंकास्पद लक्षण देखिएपछि बाग्लुङ बजारको एक विद्यालयका...
rajdhanidaily.com . १७ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं : किसानलाई रासायनिक मल अभाव हुन नदिन सरकार नेपालमै कारखाना खोल्न लागिपरेको छ। प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित कारखाना स्थापना गर्दा मुनाफादर उच्च हुने निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ। वाटर इल...
मानिसको दिमाग एकदमै जटिल हुन्छ । यसले अनेकथरीका समस्या समाधान गर्नसक्छ तर आँखाअगाडि देखिने कैयौं कुराहरू देखेर दिमागले त्यसलाई ठम्याउनै सक्दैन । सामान्य देखिने यस फोटोले इन्टरनेटमा धेरैको दिमाग रि...
lokaantar.com . २० घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनको विषयलाई लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच सार्वजनिक कार्यक्रममा नै भनाभन भएको छ । कार्यक्रममा नै नेता पौडेलले नयाँ सरकार गठनको अवसर ख...
rajdhanidaily.com . १ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
तक्मामा नेपालको पुरानो नक्सा प्रयोग भएकोबारे बोल्यो सरकार
गृह मन्त्रालयले विभूषणमा अंकित नेपालको नक्सा सम्बन्धमा भएको टीकाटिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मन्त्रालयले शनिबार एक विज्ञप्तिमार्फत घोषणा, तयारी र वितरणको प्रस्तावित समयमा रहेको ...
lokaantar.com . १८ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । तीव्ररुपमा वृद्धि भइरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि तीन साता शैक्षिक संस्था बन्द गर्न मन्त्रिपरिषद्‌समक्ष सिफारिस गरिएको छ कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को शनि...
livemandu.com . १८ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
नारायणकाजीप्रति गोकुल बाँस्कोटाको टिप्पणी : मिडफिल्ड चाहीँ काजीलाई अचम्मै कम्फर्टेबल देखिने क्या !
काठमाडौं, २८ चैत्र । नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नयाँ सरकार बनाउने प्रयत्न गरेको विष...
reportersnepal.com . १ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
देउवाले डाकेको बैठक अगाडि जसपा नेता भन्छन्, 'परिणाम आयो भने यही सरकारलाई नै समर्थन हुनसक्छ'
नयाँ सरकार निर्माण गर्नका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षीले डाकेको बैठकको केही घण्टा अगाडिसम्म पनि निर्णायक ठानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरू कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेबारे दोमनमै देखिन्छन्। आफ...
bbc.com . २ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रसारणमा हरेक वर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत् थप गर्ने सरकारको लक्ष्यमा कोभिड १९ ले धक्का दिएको छ। सरकारको ४५६ र निजी प्रवर्द्धकका ५०० गरी १ हजार मेगावाट थप गर्ने लक्ष्य थियो। त...
annapurnapost.com . २ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
पाकिस्तानी सांसद टोली बोकेर अफगानिस्तान गएको विमान असुरक्षाका कारण फर्कियो
इस्लामाबाद: पाकिस्तानी संसदका सभामुखसहित सांसदहरुको टोली बोकेर अफगानिस्तानका लागि उडेको जहाज विमानस्थल नजिकै विस्फोटक पदार्थ भएको भन्दै अवतरणको अनुमति नपाएपछि फिर्ता भएको छ । विमानस्थल नजिकै एक वर...
राजकुमार फिलिप को थिए?
महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाका श्रीमान् राजकुमार फिलिपको ९९ वर्षको उमेरमा निधन भएको बकिङ्घम राजदरबारले घोषणा गरेको छ। राजकुमार फिलिपले राजकुमारी एलिजाबेथसँग सन् १९४७ मा बिहे गरेका थिए। उनले शाही परि...
राजकुमार फिलिप: ९९ वर्ष, १४३ देश र एउटी निकै चर्चित श्रीमती
ड्यूक अफ एडिनबरा, सम्भवत: विश्वकै सबैभन्दा चर्चित श्रीमान्‌को ९९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उनले आफ्नी श्रीमती संयुक्त अधिराज्यकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयाको छायामा सात दशक बिताए। तर उनको व्यक्ति...
bbc.com . १ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर गत फागुन २८ गते नेकपा एमाले प्रवेश गरेका चार सांसदको सांसद पदसँगै मन्त्री पद समेत गुमाएकाहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले तत्काल मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्...
ratopati.com . ३ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
कल्याणकारी राज्यभन्दा कतिपयले यो परोपकार हो भनेर बुझ्ने गरेका छन्। परोपकार भनेको सामाजिक अवधारणा हो। सुसंस्कृत समाज बन्न समाज परोपकारी र राज्य कल्याणकारी बन्न जरुरी छ। राजनीति र राजकाज अन्तरसम्बन्...
nepalkhabar.com . १७ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
देशमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट (प्रजाति) को संक्रमण देखिन थालेपछि सरकारले विद्यालय बन्दसहितको ११ बुँदे निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ। आज (शनिबार) बसेको कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)...
nepalkhabar.com . २० घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सावधानी नअपनाए फेरि पनि लकडाउन हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । काठमाडौंमा शनिबार भएको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । अब पन...
मुगु । मृत अवस्थामा भेटिएकी नौ वर्षीया लक्ष्मी चौलागाईंको बलात्कार प्रयासपछि ‘हल्ला हुने डर’ ले हत्या गरिएको खुलासा भएको छ । बालिका श्री ग्रिलाह बालज्योति प्राथामिक विद्यालयमा कक्षा २ मा अध्ययरत थि...
rajdhanidaily.com . २ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
खान–पिनमा शौकीन व्यक्तिलाई कुनै विशेष खाद्य पदार्थको लाभ तथा हानीबारे जानकारी हुँदैन । उनीहरुलाई त्यो कुराले फरक पनि पर्दैन । किनकी त्यस्ता व्यक्तिलाई जुन खानेकुराको स्वाद मनपर्यो, त्यसलाई नखाइ छाड...
lokaantar.com . ३ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
२८ चैत, वीरगञ्ज । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले आफू पदका लागि नभई कम्युनिष्ट पार्टी बचाउन अघि सरेको बताएका छन् । आफ्नो समूहले वीरगञ्जमा गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गदै नेता नेपाल...
onlinekhabar.com . २३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
नयाँ सत्ता समीकरणमा जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक देखिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जसपालाई हात लिएर सत्ता हत्याउने दाउमा...
कोरोनाको छैन डर : बिस्का जात्रामा रथ तान्दा ३ घाइते
भक्तपुर : कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको विनाडर भक्तपुरमा आठ दिन नौ रातसम्म चल्ने बिस्का जात्रा शनिबारदेखि सुरु भएको छ । भक्तपुर नगरपालिका ५ टौमढीस्थित पाँचतले र भैरवनाथ मन्दिर परिसरमा बनाइ...
annapurnapost.com . १९ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
ओली किन यति ढुक्क
काठमाडौं, २८ चैत्र । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि आफूलाई सत्ताबाट हटाउन चुनौती दिएका छन् । उनले अहिले नै हटाइहाल्न चुनौती दिएका हुन् । विगतमा पनि ओलीले पटक पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चुन...
reportersnepal.com . १९ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । भक्तपुरमा कोरोना संक्रमणको प्रवाह नगरी स्थानिय बिस्केट जात्रामा सहभागी भएका छन् । बिस्का (बिस्केट) जात्राको पहिलो दिन भक्तपुरको टौमढीस्थित न्यातापोल अगाडी भैल खः (भैरवनाथको रथ) लाई थने (...
rajdhanidaily.com . १६ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
प्रचण्डको हैसियत सोध्दै टोपबहादुरले भने–कानुनी रूपमा लड्न तयारी गर्दैछु
नेकपा एमालेतिर लागेपछि माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परेका ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफूलाई कारबाही गर्न प्रचण्ड र माओवादी पार्टीको हैसियत नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले माओवादीको निर्णयविरुद्...
lokaantar.com . २ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकलाई अस्थिरताको भुमरीमा हाल्न अनैतिक तरिकाले झण्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त पार्टी खण्डित गरिएको बताएका छन् । पार्टी...
lokaantar.com . १९ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
राष्ट्रपतिले बाँडेको विभूषणमा ‘चुच्‍चे नक्सा’ नभएकोबारे के भन्छ गृह मन्त्रालय ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार राष्ट्रिय जीवनका विभिन्‍न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिलाई सम्मान गर्दै प्रदान गरेको विभूषणमा नेपालको ‘चुच्‍चे नक्सा’ नभएको भन्दै...
कुनै संगठन या पदाधिकारीले कुनै उपलब्धि देखाउन सकेन भने, ‘झिंगा मार्न नसकेको’ आरोप लगाउने चलन छ । हिन्दी ‘मुहाबरा’ भने यसको ठीक उल्टो छ । कुनै काम नगरी निकम्मा रहने क्रियालाई हिन्दीमा ‘मक्खी मारना’ ...
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र अवस्था थप भयावह हुन सक्ने निष्कर्षका साथ कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले कम्तिमा ३ साता विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ ।
ratopati.com . २० घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं : ‘दुई छोरी मैले कसरी पालूँ ? कहाँ गएर बसूँ ? के खानु ? के लाउनु ? म त सहनै नसक्ने भइसकें।’२५ वर्षीया एक युवतीले आफ्नो खपिनसक्नु पीडा यसरी सुनाइन्। आँखाबाट खस्नै लागेको आँसु माझी औंलाले पु...
annapurnapost.com . ३ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
एक्साभेटरको बकेटले च्यापेर चालकको मृत्यु
विराटनगर : मोरङको जहदा गाउँपालिका-१ भुटाहामा एक्साभेटरको बटेकले च्यापेर शुक्रबार दिउँसो चालकको मृत्यु भएको छ । सडक खन्न प्रयोग गरिँदै आएको एक्साभेटरको अगाडिको बकेटले छेउमै रहेको जेसीबीमा लगेर च्या...
श्रीलङ्कामा सौन्दर्य प्रतियोगिताका बेला बिजेताको विषयमा भएको विवादमा कोलोम्बो प्रहरीले वर्तमान मिसेज वर्ल्डलाई पक्राउ गरेको छ । मिसेज वर्ल्ड क्यारोलिन जुरीमाथि उनले बिजेताको टाउकोबाट जबरजस्ती ताज न...
ratopati.com . १ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
२८ चैत, काठमाडौं । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)मा तीन साता विद्यालय तथा कलेजहरु बन्द गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । तर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने–नलैजाने तय भइनसकेको सञ्चारमन्त्री प...
onlinekhabar.com . २० घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
आजकै दिन सन् १९१२ मा टाइटानिक जहाज आफ्नो पहिलो र अन्तिम यात्रामा निस्किएको थियो । बेलायतको साउथेम्पटन महासागरमा एउटा हिमखण्डबाट ठोक्किएर दुई टुक्रा भयो । उक्त दुर्घटनामा १५ सय बढी मारिएका थिए । यो ...
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्षमा विपुल पोखरेल विजयी भएका छन् । उनले निर्मला शर्मालाई तीनहजार बढी मतले पराजित गरेका छन् । शनिबार सम्पन्न मतगणनामा पोखरेल नेतृत्वमा रहेको प्यानलले विजयी हा...
baahrakhari.com . १२ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
ओली सरकारलाई छिट्टै विदाई गर्ने तयारी गर्दै छौँ : बाबुराम भट्टराई
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हर्कतबाट देशलाई बचाउन जिम्मेवारपूर्ण ढंगले काम गर्ने बताउनु भएको छ । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार...
news24nepal.tv . १९ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको आग्रहपछि काँग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा आइतबार दिउँसो दुई बजे ...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि अग्रसरता लिन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताले आग्रह गरेका छन् । देउवा अघि नसर...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास विरोधीहरु सरकार परिर्वतनको खेलमा लागेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । नेपाली काँग्रेससहित माओवादी केन्द्र र जसपाबीच वैकल्पिक सरकार गठनका लागि औपचारिक छलफल सुरु भएको ...
ratopati.com . २३ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौँमा मेघगर्जनसहित वर्षा
काठमाडौँ- उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा हावाहुरीसहित वर्षा भएको छ। शुक्रबार साँझदेखि हावाहुरी सुरु भएको थियो। लगातार मेघगर्जन र बिजुली चम्किरहेको छ। यसले मानिसको आवतजावत प्रभावित बनेको छ। जल तथा मौसम ...
deshsanchar.com . २ दिन अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । कोभिड १९ को दोस्रो लहर संकटपूर्ण बन्दै गएपछि केन्द्रीय संकट व्यवस्थापन बैठकले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी 'प्रोटोकल' पूर्ण रूपमा पालना गराउने निर्णय गरेको छ । कोभिडको पछिल्लो भेरियन्ट निकै चुनौ...
baahrakhari.com . १९ घण्टा अघि पूरा समाचार पढनुहोस